Gawaarida Ordu Boztepe ayaa dhaqaaqay 2019 kun oo rakaab ah sanadka 796 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Gawaarida Ordu Boztepe ayaa dhaqaaqay 2019 kun oo rakaab ah sanadka 796
16 / 01 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gondola, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY, TELPHER
gawaadhi nooca loo yaqaan "boztepe cable car" ayaa sidoo kale waday kun rakaab ah
Boztepe, oo 530 mitir u jirta badhtamaha magaalada Ordu, waxaa tagi kara martida maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba iyo sidoo kale baabuurka wadada iyo barta fiilooyinka. Sanadkii 7, 2019 kun oo rakaab ah ayaa lagu rakibay gaariga fiilada, kaas oo siinaya marin Boztepe 796 daqiiqo gudaheeda.
Khadka Baabuurta Ordu Boztepe waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee dalxiiska ee Badda Badda. Waxay ku taallaa bartamaha Badda Badarka Badda, Ordu waa xarun dalxiis oo muhiim ah oo soo dhaweynaya booqdayaasha si toos ah iyo waddada iyadoo la socota quruxdeeda dabiiciga ah.
Markaad gaadho dusha sare ee Badda Madow, waxaad sidoo kale la kulanaysaa aragti cajiib ah oo ku saabsan Ciidanka. Degaankan oo cagaar iyo buluug badani ku kulmaan, waxyaabaha ugu fiican ee la sameyn karo waa in lagu raaxeysto muuqaalka.
28 Qulqulka Ciidanka Cable Car
Waxaad ku raaxeysan kartaa aragtida sifiican oo aad sawirro uga qaadan kartaa adoo isticmaalaya khadka Ordu Teleferik kor iyo hoos ee buurta.Waxaa jira 28 qulqul oo khadka taleefanka ku yaal. Fogaanta masaafadda u jirta 8 mitir ayaa u jirta xarunta degmada.Waxaa ku yaal 2.350 xariiq telefon. Awooda rakaabka xamuulka ayaa ah 7 qof saacadiiba hal wado .. celcelis ahaan 250 oo qof ayaa sanadkii lagu qaadaa saldhiga. Aaladda matoorrada gawaarida fiilooyinka waa 750.000 kW. Gaariga fiilada leh, oo gaadha dhererkiisu yahay 341 mitir, wuxuu sidoo kale leeyahay muuqaal ah masaafada ugu dheer (500 mitir) inta u dhaxaysa labada ulood ee adduunka.
Socdaalka qadka baabuurtu wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan daqiiqo 10. Gawaarida qadka tareenka ayaa lagu magacaabaa degmooyinka Ordu. Booqdayaasha ku fuulaya gaariga telefishanka ee hoos yimaada kormeerka saraakiisha waxay sii wadaan inay ku raaxaystaan ​​aragti gaar ah oo ay la socdaan miyuusiga Badda ee xilliga gawaarida fiilada. Cabin waxaa loogu talagalay 8. Waxaa jira wadarta 28 oo dhan.
Ciidada Boztepe ee xawaaladda 3 waxay qaadeen 2 million 150 kun rakaab ah sannadkiiba
Akçaray January 2018 Rakaabka Carry As Of 3.796.453
Boostada Boztepe waxay qaadataa Million Rakaabka 1,8 ee Ordu
Boztepe Cable Car ee Ordu 6 Dayuuradaha Bin Ladin ee la kaxaysto maalintii
Badeecada rakaabka ee baabuurta telefanka ee Ordu Boztepe
Boztepe Cable Line 2 1 Million 797 Thousand People Waxay Sameeyeen Sannad
Ordu-Boztepe Cable Safarka (Video)
Mashruuca Ordu Boztepe Fudud ayaa hadda u adeegi doona dayactirka
Ordu Boztepe Xarumaha Gaadiidka Gawaarida Laba Dayac Dayactir
Ordu - Boztepe Cable Line ayaa sii wata inuu jabiyo Diiwaanka
Sida loo tago Boztepe Gondola
Jadwalka safarka kirada gawaarida Boztepe
Ku saabsan Boztepe Teleferik
Ku saabsan Ordu Boztepe Teleferik
Ku saabsan Ordu Teleferik